E-Journal: April 2008
Arnold J. Toynbee & Daisaku Ikeda
တွိုင်ဘီ - အီကေဒါ ဆွေးနွေးခန်း (မြသန်းတင့် - မောင်သာမည)။ အဲဒီ စာအုပ်လေးရဲ့ နောက်ကျောဖုံးမှာ စာအုပ်အတွက် ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်လေးက - ဤစာအုပ်တွင် သူတို့နှစ်ဦးသည် ပြဿနာတစ်ရပ်ကို အတွေးအခေါ်၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စိတ်ပညာ၊ သိပ္ပံ စသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်အမြင်များနဲ့ စေ့စပ်စွာ ဆွေနွေးထားပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ရှုထောင့်မျိုးစုံ အမြင်ကျယ်တာမည့်အပြင် တွေးဆ ဆင်ခြင်စရာများလည်း အများကြီးရလာပါမည်။ လူ့လောက၏ ပြဿနာများအပေါ် နက်နက်နဲနဲ အာရုံစိုက်သူများ လက်မလွှတ်စတမ်း ဖတ်ရမည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ - ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။ လူ့လောက ပြဿနာတွေကို အာရုံစိုက်တာ မစိုက်တာထက် ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တာဆို ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး ပုဂ္ဂျိုလ်စွဲနဲ့ ဖတ်မိပါတယ်။ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ဆွေးနွေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဆရာမြသန်းတင့်က ဒီစာအုပ်ကို အတွေးအမြင်စာစဉ်မှာ ဆက်တိုက်ဘာသာပြန်ရင်း အပြီးတိုင်ဘာသာမပြန်ဘဲ လူ့လောကကို နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။ ဆရာ မောင်သာမညက ကျန်နေတဲ့ အပိုင်းတွေကို ဆက်လက် ဘာသာပြန်ပြီး စာအုပ်အနေနဲ့ ထုတ်ထားတာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ ကဏ္ဌလေးတွေလဲ စုံတယ်ဗျ။ လူမှုရေးဘဝ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိပညာအကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေး စသဖြင့်ပါပဲ။ စာအုပ်ကတော့ ဖတ်နေဆဲပါ။ တွေးစရာ၊ စဉ်းစားစရာလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ဖြည်းဖြည်းပဲ ဖတ်နေမိတယ်။
စာကောင်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရရင် ပြန်မျှဝေချင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကပါနေတော့ ဒီစာအုပ်မှာ ဖတ်ပြီးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကို ဝေမျှလိုက်တယ်။ ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့အပိုင်းထဲကပါ။ ဖတ်ပြီးသားသူတွေအတွက် ပြန်တွေးစရာ၊ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်က စဉ်းစားတွေးမြင်စရာလေးတွေရမယ်ဆိုရင် လက်ညောင်းခံရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ဝေမျှချင်တာကလည်း ဖို-မကိစ္စဆိုတာ သာမာန်လူသားတွေ အားလုံး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကိုး။ တကယ်က အဲဒီ ကိစ္စမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း တွေးကြည့် မြင်ကြည့် ဘူးတာတွေရှိနေတယ်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ အားလုံးလည်း ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ အထင်တွေ အမြင်တွေရှိကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုအရ ဖို-မ ကိစ္စဟာ အရမ်းကာရော မပွင့်လင်းရပါဘူး။ အဲ သိုသိုသိပ်သိပ် နေတတ်ရမယ်လို့တောင် ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်။ အနောက်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီကိစ္စမှာ တော်တော်လေး ထိန်းချုပ်မှုတွေ များတယ်။ အရင်ကဆို နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ဖို-မကိစ္စ ပွင့်လင်းရမယ်လို့ကို ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဘူးတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ကလေးအတွေးပါ။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ပွင့်လင်းတဲ့ ဖို-မကိစ္စဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပေါ့။ နောက်တော့ ဒီကိစ္စဟာ ပွင့်လင်းလွန်းပြန်ရင် မကောင်းဘူးလို့ တွေးမိပြန်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် ကျွန်တော့်အတွေးတွေ မျှချေတစ်ခုနားကို ချဉ်းကပ်သွားပြီလို့ ကျွန်တော်က ထင်လိုက်ပါပြီ။
တွိုင်ဘီ - အီကေဒါ ဆွေးနွေးခန်း စာအုပ်လေးမှာ အခြေခံလူသား ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က “ဖိုမကိစ္စ - လွတ်လပ်ခွင့်ပြဿနာ” ဆိုတဲ့ အခန်းလေးကို ဖတ်ပြီး မျှချေတစ်ခု ရောက်အောင် စဉ်းစားလို့ရတယ်ပြောတာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကိစ္စမှာ ရေးကြီးနေတာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်တာက အချစ်စိတ်လို့ ကျွန်တော်လည်းပဲ တွေးမိလိုက်ကြောင်းပါ။
ဖို-မကိစ္စ -- လွတ်လပ်ခွင့်ပြဿနာ
အီကေဒါ - ဒီနေ့ ဖို-မကိစ္စ လွတ်လပ်ခွင့် ပြဿနာ Sex Liberation ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ အဝန်း ကြီးကျယ်တဲ့ ပြဿနာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဥရောပ၊ အမေရိကနဲ့ ဂျပန်တို့မှာတော့ ပိုပြီးကြီးတာပေါ့လေ။ ပြဿနာက ဘယ်လောက်အထိ ကြီးသလဲဆိုရင် ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခြေခံတွေကို ကိုင်လှုပ်နေသလိုပဲ။ ခုဆိုရင် တစ်ခါတုန်းက ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ယူခဲ့ကြတဲ့ အရာတွေကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်းပြောပြီး ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း လုပ်နေကြပါပြီ။
ဖို-မကိစ္စကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို အတင်းအဓမ္မ ဖုံးကွယ်မထားသင့်ဘူး။ ဒီလိုဖုံးကွယ်ထားရင် ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်လို့ မှားယွင်းတဲ့သဘောထားတွေ ပေါ်တာနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့လူတွေ ပြောနေသလို ဖို-မကိစ္စမှာ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်တယ်၊ လိုက်လျောတဲ့ သဘောထားရှိသင့်တယ်၊ ဒီလိုလုပ်တာ လူသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် နည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး။ လွတ်လပ်မှု Freedom နဲ့ စည်းဝါးလွတ်မှု License ဟာ မတူပါဘူး။ ခေတ်သစ် ဖို-မကိစ္စ လွတ်လပ်ခွင့် ပြဿနာမှာ ကြီးမားတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြီးတစ်ခု ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဖို-မကိစ္စကို ချဉ်းကပ်ကိုင်တွယ်ရာမှာ အခြေခံကျတဲ့ အချက်တစ်ခုခု လိုနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
တွိုင်ဘီ - လူဟာ တိရစ္ဆာန်လည်း ဖြစ်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိစိတ်ရှိပြီး စိတ်(နာမ်တရား)လည်း ရှိတဲ့ သတ္တဝါလည်းဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာတင် လူရဲ့အနေအထားဟာ တော်တော်ခွတီးခွကျနိုင်ပြီး အနေရခက်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေတယ်။ သူ့မှာ စိတ်(နာမ်တရား) ရှိတဲ့အတွက် အခြားတိရစ္ဆာန်တွေမှာ မရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ (Diginity) မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သူ့ဘာသာသူ သတိပြုမိတယ်။ ဒီဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာလည်း သူသဘောပေါက်တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ဖို-မဆက်ဆံရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ အာသာဆန္ဒတွေရှိသလို သူ့မှာလည်း အလားတူတွေရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့တော့ သူအနေရခက်တယ်။ သူဟာ အရိုင်းအစိုင်း တိရစ္တာန်တွေနဲ့ ဇီဝကမ္မဗေဒ သဘောအရ ဆွေမျိုးနီးစပ် တော်နေပါကလား၊ ဒီလို ဆွေမျိုးတော်နေတာဟာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို စိန်ခေါ်နေတာပါကလား ဆိုတာကို သိတော့ သူအနေရခက်တယ်။ အဟိတ် တိရစ္ဆာန်တွေကတော့ ဒီလို ဖို-မကိစ္စတွေကို လုပ်ဆောင်နေရတာကို မရှက်ဘူးလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိစိတ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေမှ မဟုတ်ဘဲကိုး။ ဒီလို ဂုဏ်သိက္ခာဆုံးရှုံးသွားမှာကို ကြောက်ပြီး ရှက်နေတာ၊ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းခံစားရတာ ဒါတွေဟာ လူမှာတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေပဲ။
ကိုယ့်မှာ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တူတဲ့ အချက်တွေ ရှိသည့်တိုင် လူဟာ တိရစ္ဆာန်နဲ့ ကွဲပြားခြားနားအောင် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းထားချင်တယ်။ ဒီမှာတင် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်သိမ်းဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာကြံလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ အစဉ်အလာ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေပဲ။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲမှာ မွေးကတည်းကပါလာတဲ့ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ပက်သက်လို့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို တီထွင်ခဲ့ကြရတယ်။ တိရစ္ဆာန်များကတော့ ဒီလို ဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေကို မလုပ်ကြဘူးပေါ့။ လုပ်လဲ မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု၊ ပြုစု ပျိုးထောင်မှုတစ်ခု ဘယ်လောက် အဆင့်မြင့်သလဲဆိုတာကို တိုင်းထွာစမ်းသပ်ကြည့်ချင်ရင် အဲဒီယဉ်ကျေးမှုမှာ အဲဒီကိုယ်အဂ်ါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ၊ ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်လို့ ဘယ်လိုဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေ ရှိသလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။
အီကေဒါ - ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ ဖို-မဆက်ဆံရေးကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် ထုံးစံတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ရှိကြတယ်။ အဲဒီ ထုံးစံတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို မျိုးဆက်တစ်ခုကနေ မျိုးဆက်တစ်ခုကို လက်ကမ်းလာခဲ့ကြတယ်။ ဒီနေ့ အချိန်မှာ ဖို-မကိစ္စပညာရေး Sex Education ကို အထူးစပါယ်ရှယ် ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ သင်ကြားပေးနေကြတယ်။ အမှန်ကတော့ ဖို-မကိစ္စပညာရေးဟာ ပုံသဏ္ဌာန်တစ်မျိုး မဟုတ်ရင် တစ်မျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ ရှိခဲ့ကြပြီးသားပါ။
တွိုင်ဘီ - ဟုတ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအတော်များများမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်လို့ ထုံးတမ်းဓလေ့တွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ ထုံးတမ်းဓလေ့တွေဟာ အခါအားလျော်စွာ ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေနဲ့ အညစ်အကြေးစွန့် အင်္ဂါတွေကို ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေရှေ့မှာ ကိုယ်လက်နှီးနှောခြင်း မပြုကြဘူး။ လူတွေရှေ့မှာ သဘာဝကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ ကိစ္စကို မလုပ်ကြဘူး။ စားတဲ့ သောက်တဲ့နေရာမှာလည်း ထမင်းဝိုင်းယဉ်ကျေးမှု Table Manners တွေကို လိုက်နာကြတယ်။ ထမင်းဝိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး အများကြီး ကွဲပြားကြတယ်။ ထမင်းဝိုင်း အလေ့အထမှာ ကွဲပြားနေတာဟာ ယဉ်ကျေးမှုချင်း ကွဲပြားနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မသိမသာ ညွှန်ပြနေတဲ့ အချက်တွေပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထမင်းဝိုင်းအလေ့အထ ကွဲပြားတာကိုကြည့်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု ကျန်းမာတယ် မကျန်းမာဘူး၊ (နိမ့်တယ်၊ မနိမ့်ဘူး) လို့တော့ အတိအကျ တပ်အပ်ပြောလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စားခြင်းသောက်ခြင်းအမှုဟာ တိရစ္ဆာန်အားလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်နေလို့ပဲ။ လူကလည်း စားခြင်း၊ သောက်ခြင်းအမှုမှာ ကြွက်တွေ၊ နွားတွေနှင့် သွားတူနေတဲ့အတွက် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူး။ (လူက ကြွက်တွေ ကိုက်ဖြတ်သလို၊ နွားတွေ စားမြုံ့ပြန်သလို မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ။) ဒီလိုဆိုရင် သူတို့နဲ့ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း အမှုမှာ တူနေသည့်တိုင် ဘာမှရှက်စရာမလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုချင်း ဘယ်လောက်ပဲကွဲကွဲ အညစ်အကြေးစွန့်တာနဲ့ ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိစ္စကတော့ လူတွေအဖို့ ပင်ကိုအားဖြင့်ကို ရှက်စရာကောင်းနေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီသဘာဝ ကိစ္စတွေမှာ လူဟာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို လိုက်နာရတယ်။
အထူးသဖြင့် ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိစ္စဟာ ရှက်စရာကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖို-မအာသာဆန္ဒဟာ အရွယ်ရောက်မှပေါ်လာတဲ့ နောက်ကိစ္စကိုး။ ဒါ့ကြောင့်မို့ အရွယ်ရောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဘဝရဲ့ ဖို-မခြင်းရာတွေကို သိအောင်လုပ်ပေးရတယ်။ ဒီလိုသင်ပေးရတာဟာ တော်တော်တော့ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ ပညာရေးဖြစ်တယ်။ လူကြီးမိဘက ဖို-မ ဆက်ဆံရေးကိစ္စကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ကလေးမှာ ဖို-မစိတ်တွေ ထကြွနိုးကြားလာသည်အထိ သူ့ကို အသိဉာဏ်မပေးခဲ့ရင် ကလေးရဲ့သိလိုစိတ်၊ စူးစမ်းစိတ်ကို နှိုးဆွပေးရာရောက်တယ်။ သူ့ကို ဘာမှမသိစေရဘူးဆိုပြီး ကလေးရဲ့ မကျေနပ်ချက်ကို နှိုးဆွပေးရာရောက်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကလေးဟာ ဖို-မကိစ္စကိုပဲ စိတ်ရောက်နေပြီး ဖို-မကိစ္စကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မိဘက ကလေးရဲ့ ရှေ့မှာတင် ဖို-မကိစ္စကို ပြုမူနေကြတယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့အမြင်မှာ မိဘရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျသွားတတ်တယ်။ ကဘေးဟာလည်း ကိုယ်ခန္ဓာမရင့်မှည့်မှီမှာ ဖို-မစိတ်တွေ ဝင်သွားတတ်တယ်။ ဖို-မကိစ္စ ပညာရေးမှာ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိတယ်။ တစ်ခုက အန္တရာယ်များတဲ့ အလွန်အကျွံပွင့်လင်းမှု၊ လိုက်လျောမှုဖြစ်ပြီး တစ်ခုကတော့ အန္တရာယ်များတဲ့ အလွန်အကျွံ လျှို့ဝှက်မှုနဲ့ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုတို့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနှစ်ခုကြားမှာ ကျေနပ်လောက်တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းကို ရှာရတာဟာ တော်တော်ခက်တယ်။
အီကေဒါ - မှန်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊ ဒီပြဿနာဟာ တစ်လျှောက်လုံး ခက်လာတဲ့ ပြဿနာပါ။ အခုထိလည်း ခက်နေတုန်းပါပဲ။
တွိုင်ဘီ - ခက်တာက လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖို-မ ဆက်ဆံရေး ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ဖို-မ ဆက်ဆံရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တမင်ဖုံးကွယ်နိုင်မှ ရှိတဲ့အရာမျိုး၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အရာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းချင်ရင် သည့်ထက်ကောင်းတဲ့ နည်းကို ရှာလို့မတွေ့သေးဘူး ဆိုပါတော့။ လူမဟုတ်တဲ့ အဟိတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို လူ့အသိဉာဏ် တပ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီး လူသားတွေရဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူတွေကို လေ့လာခိုင်းလိုက်တယ် ဆိုပါတော့။ လက်စသတ်တော့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ အတုအယောင်ပါဗျာ။ လူတွေက သူတို့နဲ့ တခြားတိရစ္ဆာန်တွေ အတူတူပဲဆိုတာ မသိအောင် ဖုံးကွယ်ဖို့ လုပ်ထားတဲ့ အစဉ်အလာတီထွင်တထားတဲ့ အရာပါလို့ ပြောမှာ သေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူကတော့ သူ့မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်။ အဲဒီ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းမထားနိုင်ရင် လူ့ထက်အောက်ကျတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားမှာပဲလို့ ရိုးသားစွာ ယုံကြည်နေတယ်။ စောစောက ဥပမာပြတဲ့ လေ့လာသူရဲ့မှတ်ချက်ထက် ဒါကပိုမှန်တယ်။ ဒီတော့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ဘာလဲ။ လူဟာ ဇီဝကမ္မဗေဒအားဖြင့် တိရစ္ဆာန်ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်သည့်တိုင် အဲဒီဖွဲ့စည်းမှုအပြင် တစ်ချိန်တည်းမှာ စိတ်(နာမ်တရား)ရှိတဲ့ သတ္တဝါလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိအမှတ်ပြုချက်ကို အခြားနည်းနဲ့ ခေါ်ထားတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပက်သက်လို့ လူ့ရဲ့နားလည်ခံယူမှုပဲ။
အီကေဒါ - ဟုတ်ကဲ့။ လူ့ရဲ့နာမ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု (ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းမှုစသည်)တို့ဟာ (စောစောက ဥပမာပေးသွားတဲ့ လေ့လာသူထင်သလို) အပေါ်ယံ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ၊ အတုအယောင်တွေ၊ အလိမ်အညာတွေလို့ ပြောခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လူတီထွင်ခဲ့တဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေဟာလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အမှန်ကတော့ လူဟာ စိတ်(နာမ်တရား)ရှိတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်နာမ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း သူ့ဘဝမှာ ကြီးစွာသော အစိတ်အပိုင်းက ပါဝင်နေကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖို-မ ကိစ္စ၊ စားသောက်ခြင်း ကိစ္စနှင့် လူ့ရဲ့ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပက်သက်တဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းများဟာလည်း အတော်အတန် အဓိပ္ပါယ်ရှိနေရပါတယ်။
တွိုင်ဘီ - လူဟာ ဖို-မအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် သူလိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ချမှတ်ထားရတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် လူဟာ သူ့လူသားမျိုးနွယ်ကို ခိုင်ခံအောင်လုပ်ပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်။ ခုအချိန်ထိတော့ လူ့လောကမှာ ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း အားလုံးတူညီတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေတော့ မရှိသေးဘူးပေါ့။ လူ့အဖွဲ့စည်း အမျိုးမျိုးမှာ ရှိနေတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေဟာ အမျိုးမျိုး ကွဲနေခဲ့ကြတာပဲ။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အချို့ကပိုကောင်းတယ်၊ မကောင်းတာတွေကိုလည်း အစဉ်အမြဲ ပြုပြင်နေရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခုသိရသလောက်အထိတော့ စည်းကမ်းချက်တွေအားလုံးကို စွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရယ်လို့တော့ တစ်ခုမှ မရှိသေးဘူး။ ဒီလို စွန့်လွှတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်လည်း အဲဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့အတွက် တော်တော်ခက်သွားလိမ့်မယ်။ လူမှာ အခြားသော တိရစ္ဆာန်များထက် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့် အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူမဟုတ်တဲ့ အဟိတိရစ္ဆာန်တွေထက် ကောင်းအောင် နေမလား၊ ဆိုးအောင် နေမလား၊ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်သလို နေနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ အောက်မှာ မနေခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တိရစ္ဆာန်တွေထက် ဆိုးသွားမှာပဲ။
ဖို-မ ဆက်ဆံရေး ပြဿနာနှင့် ပက်သက်လို့ မှန်ကန်တဲ့ မှတ်ကျောက်ကတော့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းရေးပဲ။ အသွေးအသား ကိစ္စဖြစ်တဲ့ ဖို-မ ဆက်ဆံရေးကိစ္စကို လူဆန်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ နာမ်အရည်အသွေးတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒီ နာမ်အရည်အသွေးကတော့ ချစ်မေတ္တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ချစ်မေတ္တာဟာ ဖို-မ ဆက်ဆံရေးကိစ္စကို လူဆန်အောင်လုပ်ပေးရာမှာ ဂုဏ်သိက္ခာထက် အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဖို-မ ဆက်ဆံရေးကိစ္စကို ချစ်မေတ္တာအရည်အသွေးနဲ့ လူဆန်အောင် လုပ်ရာမှာ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ မရှိမဖြစ်တဲ့ လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်မေတ္တာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမပါတဲ့လူရဲ့ ဖို-မဆက်ဆံရေးဟာ အဟိတ်တိရစ္ဆာန် အာသာဆန္ဒတစ်ခုကို ဖြေဖျောက်ခြင်း သက်သက်မျှသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိစ္စမျိုးဟာ စိတ်ဓါတ်အရ အောက်တန်းကျပါတယ်။ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာတော့ ဖို-မဆန္ဒ တောင့်တမှုကို တုံ့ပြန်ပုံဟာ သိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အတွက် အပြစ်ကင်းတယ်။ သူတို့မှာတော့ ဖို-မ ဆက်ဆံရေးကိစ္စ ဖို-မ ဘဝကို မွေးကတည်းကပါလာတဲ့ သဘာဝထိန်းချုပ်မှုများက ညှိပေးတယ်။ လူမှာတော့ ချစ်မေတ္တာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့ ဖို-မ ကိစ္စဟာ တိရစ္ဆာန်သဘော ဆောင်တယ်လို့တောင် မပြောချင်ဘူး။ စိတ်ဓါတ်ရေးနဲ့ ကျင့်ဝတ်ရေးအရ တိရစ္ဆာန်တွေထက်တောင် အောက်တန်းကျတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေသေးတယ်။
အီကေဒါ - ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ စည်းကမ်းရယ်လို့ မရှိရင် လူ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာ လူဆန်တဲ့ အဖြစ်ကတောင် ရပ်စဲသွားမှာပါ။ လူလို့တောင် မခေါ်ထိုက်တော့ပါဘူးလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူ့ထက်အဆင့်နိမ့်တဲ့ အချို့သော တိရစ္ဆာန်အဖွဲ့စည်းများမှာပင်လျှင် တိရစ္ဆာန်တွေဟာ စည်းကမ်းကို လိုက်နာနေကြတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိထားကြတာကိုး။ ဥပမာအားဖြင့် အချို့သော လူဝံများဟာ ကလေးငယ်ကို အစာကျွေးခြင်းနဲ့ ဖို-ဆက်ဆံရေး ကိစ္စများနဲ့ပက်သက်လို့ စည်းကမ်းတစ်ချို့ရှိနေကြတယ် မဟုတ်လား။ ဒီစည်းကမ်းတွေကို လူဝံအဖွဲ့စည်းဝင်တွေကလည်း တိတိကျကျ လိုက်နာကြတာပဲ။ စည်းကမ်းမရှိတဲ့လူဟာ အဲဒီလို လူဝံတွေထက် လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအရ အောက်ကျနေတော့မှာပေါ့။
တွိုင်ဘီ - အဲဒီစည်းကမ်းတွေထဲမှာ ဖို-မဆက်ဆံရေး စည်းကမ်းတွေကတော့ အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖို-မ ဆက်ဆံရေး ကိစ္စဟာ လူ့သဘာဝရဲ့ တိရစ္ဆာန်သဘောဆန်တဲ့ အပိုင်းမှာ အလေးနက်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေတာကိုး။ တခြား ကိစ္စတွေမှာ တိရစ္ဆာန်သဘောဆန်နေရင် တစ်ယောက်ချင်း၊ တစ်ဦးချင်းမျှသာ ထိခိုက်မယ်။ ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိစ္စကတော့ အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်။ ကလေးတွေ မွေးလာရင် သူတို့နဲ့ပါ သက်ဆိုင်လာရပြီ။ လူတစ်ဦးချင်းဟာ ဖို-မဆက်ဆံရေးမရှိဘဲနဲ့ နေနိုင်တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ သီလရှင်တွေကိုကြည့်ပါလား။ သူတို့ဟာ မမြတ်သောအကျင့်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ လူ့အနွယ်ကြီးကတော့ ဖို-မဆက်ဆံရေးမရှိဘဲ အရှည်မတည်မြဲနိုင်ဘူး။ လူ့အနွယ်ကြီးဟာ သူ့ဘာသာသူမှ မတည်နိုင်ဘဲကိုး။ သဘာဝကြီးကပေးလိုက်တဲ့ ဖို-မဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းရေးကိစ္စဟာ ချစ်မေတ္တာသဘော သက်ဝင်နေရမယ်။ ဒါမှသာလျှင် အဲဒီကိစ္စဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး တင့်တယ်လိမ့်မယ်။ ဒီသဘောကို ဖို-မဆက်ဆံရေး စည်းကမ်းက ပြဌာန်းပေးခဲ့တယ်။ လင်နဲ့ မယားရဲ့အချစ်၊ သားသမီးနဲ့ မိဘရဲ့ အချစ်ဟာ လူ့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုနဲ့ ကျင့်ဝတ်မှာ အချက်အချာဖြစ်နေတယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ်စ်ပြောသလိုပေါ့။
အီကေဒါ - အခြေခံအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော် သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖို-မကိစ္စမှာ ဖို-မဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး ကျင့်ဝတ်ပျက်ပြားသွားခဲ့တာ၊ ဖို-မ ဆက်ဆံရေးမှာ အချစ်မပါတော့တာ၊ ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာ လူ့ဘဝကို ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးသက်သက်နှင့်သာ ကြည့်လို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဖို-မကိစ္စဟာ စိတ်ဓါတ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရယ်လို့ ဘာမှမရှိတော့ဘဲ သွေးသားဆန္ဒဖြေဖျောက်ဖို့ ကိစ္စသက်သက်လို့ ယူဆလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ အယူအဆဟာ ဘာလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရသလဲဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုနိုင်သေးသမျှ အဖြေကို ရှာလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
တွိုင်ဘီ - လူ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ အပြုအမှုတွေ၊ ထုံးစံတွေအားလုံးဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် ဆက်စပ်ပေါင်းစုနေတဲ့ ကွန်ခြာကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဘဝရဲ့ ဘက်အသီးသီးကို ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ စည်းကမ်းတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြားမှာ ယုတ္တိဗေဒကျတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတော့ ရှိချင်မှ ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုတော့ တကယ်အမှန်ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘက်တစ်ဖက်မှာ လိုက်လျောမှု၊ သို့မဟုတ် တင်းကျပ်မှု တစ်ခုခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် အဲဒီလိုလုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက် အခြားတစ်ဖက်ကိုလည်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားတတ်တယ်။ ဒီနေ့အချိန်မှာ ဖို-မဆက်ဆံရေးနှင့် ပက်သက်လို့ လျော့ပေါ့ခွင့်ပြုချက်တွေ ပေါ်ပေါက်တာနေချိန်မှာ မှုးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု ခေတ်စားလာတာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အောင်မြင်မှု၊ နိုင်ငံရေးရာ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ဖြတ်လမ်းလိုက်တဲ့အနေနှင့် မရိုးမဖြောင့် လုပ်လာကြတာ၊ အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းတွေကို သုံးလာကြတာဟာ မတော်တဆ ဖြစ်လာကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု စိတ္တဗေဒသဘောအရ ဆက်စပ်နေတယ်။
လူ့ဘဝရဲ့ ဘက်အသီးသီးမှာ မကြာခင်တုန်းက ဥပဒေမဲ့မှု စည်းကမ်းမဲ့မှုတွေ အများကြီးပေါ်တာခဲ့တယ်။ ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေအနက် တစ်ကြောင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုနှင့် အဲဒီစစ်နှစ်ခုအကြားမှာဖြစ်တဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ စစ်ပွဲတွေထဲမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများကို စစ်သားအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့လို့ပဲ။ စစ်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို သတ်ဖို့ ဝန်လေးတဲ့ သာမာန်စိတ်ထားကို တမင်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးလိုက်တယ်။ စစ်သားတစ်ယောက်အဖို့ မိမိလို လူအချင်းချင်းကို သတ်ရတာဟာ တာဝန်တစ်ခုပဲ။ တကယ်လို့ အရပ်ဝတ်အရပ်စား တစ်ယောက်အနေနှင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ရင် အဲဒီအမှုဟာ ရာဇဝတ်မှုကြီးပေါ့။ အဲဒီ အဓိက ကျင့်ဝတ်သီလာကြီးကို ကျိုးကြောင်း ညီညွတ်မှုကင်းစွာ၊ ဆိုးယုတ်စွာ ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တာဟာ သဘာဝအားဖြင့် စိတ်ပျက်စရာလည်းကောင်း၊ နားမလည်နိုင်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ဒါတင်မကဘူး။ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ သာမာန်တွေ့နေကျ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ဝေးကွာသွားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ သာမာန်တွေ့နေကျ လူမှုအထိန်းအကွပ်တွေကလည်း လွတ်ကျွတ်သွားတယ်။ ဒါဟာ ဘာမှ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗီယက်နမ်မှာ အမေရိကန် စစ်တပ်တွေ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားတာဟာ ဘယ်လို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်တဲ့ အထင်ရှားဆုံး နမူနာပဲ။
အီကေဒါ - ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဟာ ဒီလို အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားမှုမျိုးကို ယူလာတာချည်းပါပဲ။
တွိုင်ဘီ - စစ်ဟာမကောင်းမှုဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံစိတ်ဓါတ်ကတော့ အကောင်းမှုမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မရည်ရွယ်ပဲနှင့်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်လို့ဖြစ်စေ သိပ္ပံစိတ်ဓါတ်ဟာ လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့ တရားဥပဒေမဲ့မှုတွေကို အထောက်အကူပေးနေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖို-မဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ ပိုဆိုးတယ်။ သိပ္ပံပညာမှာ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရ ချီးကျူးရမယ့် အချက်တွေရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ အမှန်တရားကို အပတ်တကုတ်ရှာဖွေတယ်၊ ရင်ဆိုင်တယ်။ သိပ္ပံပညာဟာ အစဉ်အလာ ယုံကြည်မှုတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ အလေ့အထတွေ အားလုံးကို စိန်ခေါ်တယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာပဲ အစဉ်အလာ ဖို-မဆက်ဆံရေး ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေမှာ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားမှုတွေ ရှိခဲ့တာပဲ။ ကျင့်ဝတ်သဘောအရ ကြည့်ရင် ဒါဟာမှန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကန့်သတ်ချက်က တင်းကျပ်လေလေ၊ ကန့်သက်ချက်ကို ချိုးဖောက်မှုဟာ ကြိန်ဖန်များပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်လာလေလေ ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီ ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဖုံးကှယ်ထားမှုဟာလည်း ပိုပြီး ကြောင်သူတော်ဆန်လာလေလေ ဖြစ်မှာပဲ။ ဒီနေ့ ကလေးတွေက အမှန်တရားကို ရှာတတ်တဲ့ သိပ္ပံစိတ်ဓါတ်ရှိလာအောင်၊ အတုအယောင်တွေကို မုန်းတတ်တဲ့ သိပ္ပံစိတ်ဓါတ်ရှိလာအောင် သင်ကြားလာခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုသင်ကြားလာတာဟာ ကျောင်းကတင် သာမာန်သင်ကြားပေးလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ခေတ်ရေစီး Zeitgeist ကပါ သင်ကြားပေးလိုက်တာ။ ရလာဒ်အဖြစ် ဒီနေ့ခေတ်မှာ မိဘနှင့် အစိုးရရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ဒါနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ သြဖာအာဏာဟာ ယုံကြည်မှုကွာဟချက်ကြီးနှင့် လာတွေ့နေရတယ်။ သူတို့မိဘတွေဟာ ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိစ္စမှာရော၊ တခြားကိစ္စတွေ အားလုံးမှာရော သူတို့ပြောသလို မလုပ်ကြဘူးလို့ ဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေ ထင်လာကြတယ်။
ဖို-မ ဆက်ဆံရေး အပြုအမူနှင့်ပက်သက်လို့ အစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဒီနေ့ ချိုးဖောက်နေကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ အဲဒီအကြောင်းဟာ တစ်ခုပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းမှန်ရင် တက်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို သူတို့ရဲ့ ဖို-မ ဆက်ဆံရေး အပြုအမူတွေ မှန်ကန်နည်းလမ်းကျအောင် အာဏာပိုင်တွေအနေနှင့် အာဏာစက်ကိုသုံးပြီး နှိက်ကွပ်တဲ့နည်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဖို-မ ဆက်ဆံရေး ကိစ္စကို ခြိုးခြံကြအောင် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု လုပ်ပြီး ဆော်သြတဲ့ နည်းတွေနှင့်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး။
အီကေဒါ - ကျွန်တော်ကတော့ ဖို-မကိစ္စ စည်းဝါးလွတ်မှုကို တစ်မျိုးမြင်တယ်။ ဖို-မကိစ္စမှာ စည်းဝါးလွတ်လာကြတာဟာ ဘဝရဲ့ အတွင်းအဇ္ဖျတ္တအင်အား Internal Force of Life ယုတ်လျော့ အားနည်းလို့ ဖြစ်လာတာလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဒါဟာ တစ်ကယ့် အကြောင်းအရင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်ရဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ ယျဉ်ကျေးမှု သြဇာက သိပ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ အဲဒီအတွင်း အဇ္ဖျတ္တအင်အားဟာ လျော့ပါးလာတယ်။ ဖို-မကိစ္စကို သူ့နေရာမှန် ထားဖို့အတွက် ရှင်သန်တက်ကြွတဲ့ အချစ်ဓါတ်လိုအပ်တယ်။ အဲဒီ ရှင်သန်တက်ကြွတဲ့ အချစ်ဓါတ်ဟာ အားနည်းယုတ်လျော့နေတဲ့ ဘဝအင်အားက မွေးဖွားမလာနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကို အချစ်ရဲ့ စေ့ဆော်မောင်းနှင်မှုမှ တစ်ဆင့် တွေ့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ အယူအဆကို ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်နဲ့တင် မလုံလောက်သေးဘူး။ ရှေ့ကို တစ်ဆင့် လှမ်းရအုံးမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုတွေကို လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်စေချင်ရင် အချစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဘဝအင်အားစုတွေကို ယုံကြည်ရလိမ့်မယ်။ လူ့အနွယ်ကြီးကို မှန်ကန်တဲ့ ဖို-မဆက်ဆံရေး လမ်းပေါ်ကို ရောက်စေချင်ရင် စိတ်ဓါတ်ကို ချိုးနှိမ်ပစ်တဲ့ ပြင်ပအင်အားစုတွေကို ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း ဘဝကိုထောက်ပင့်တဲ့ ဘဝရဲ့ မူလအစကို ပြန့်ပွားစေတဲ့ အတွင်းအဇ္ဖျတ္တအင်အားစုကို ဖွံဖြိုးအောင်၊ ရှင်သန်အောင်၊ ခိုင်မာအောင် လုပ်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မယ် ထင်သလဲ။
တွိုင်ဘီ - ဖို-မကိစ္စ စည်းဝါးလွတ်မှုကို ကုစားဖို့ တစ်ခုတည်းသောဆေးကတော့ အပြုသဘော ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ ဖို-မကိစ္စ စည်းဝါးလွတ်မှုဟာ လူ့လောကကြီးရဲ့ အနာဂတ်ကို ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာ၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တာကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာချက်ဖြစ်တယ်။ ကုရာဆေးနည်းကတော့ တက်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ရည်မှန်းချက်ထားပေးဖို့ပဲ။ အဲဒီ ရည်မှန်းချက်ဟာ မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ရမယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မဆန်ရဘူး။ လက်တွေ့ကျရလိမ့်မယ်။ ဖို-မဆက်ဆံရေး အပြုအမူအတွက် ဘယ်စည်းကမ်း၊ ဘယ်သတ်မှတ်ချက်ဟာဖြင့် ကောင်းတယ်၊ မြတ်တယ်ရယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက လူ့ရဲ့ ဖို-မဆက်ဆံရေးဟာ တစ်စုံတစ်ခုသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ ထ်ိန်းချုပ်မထားခဲ့ရင် လူဟာ တိရစ္ဆာန်အဖြစ် လျောကျသွားမှာပဲ။ ဒါဖြင့်ရင် အဲဒီစည်းလမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ ဘယ်လို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မျိုးတွေ ဖြစ်ရမလဲ။ လူကို အဟိတိရစ္တာန်နဲ့ အတူတူဖြစ်စေတဲ့ ဇီဝကမ္မ ဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအနက် ခွအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ ဖို-မဆက်ဆံရေး ကိစ္စကို လူ့ဂုဏ်သိက္ခမျိုးရှိအောင် လုပ်ပေးတဲ့၊ လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
တွိုင်ဘီ - အီကေဒါ
(မြသန်းတင့် - မောင်သာမည) စာမျက်နှာ ၁၁ မှ ၂၀ ထိ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:43 PM 11 comments
အခုတလော ကျနော် ခွေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စကားပုံတွေ၊ လူတွေနဲ့ ခွေးတွေရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေး အကြောင်းတွေကို တွေးနေမိပါတယ်။ ကျနော်သိသလောက်၊ စဉ်းစားရသလောက် ခွေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နေ့တိုင်းပြောစကားတွေထဲက စကားလုံးတွေ၊ စကားပုံတွေကို ရေးချကြည့်ပါဦးမယ်။
လူတစ်ယောက်က မဟုတ်တရုတ်လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေရင်၊ အတော့်ကို အဆင့်အတန်းနိမ့်နိမ့် အပြုအမှုတစ်ခု၊ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်ဖို့ကြံစည်နေပြီဆိုရင် ပြောလေ့ရှိတာက “ခွေးကျင့်ခွေးကြံမကြံနဲ့”။ ခွေးတွေက တစ်ခုခုစားစရာရှိရင် လူတွေမသိအောင် အသာကလေး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ခိုးစားတတ်တယ်။ ပိုင်ရှင်က ကြည်ဖြူလို့ ကျွေးမှ စားရသောက်ရမှာကို စားလိုစိတ်နဲ့ ခွေးက အဆင့်အတန်းနိမ့်နိမ့်ကြံစည်တတ်တာမျိုးကို အစွဲပြုပြီး ခွေးကျင့်ခွေးကြံမကြံနဲ့လို့ ပြောစကားပေါ်လာတာလားမသိနော်။ (ကျနော်က ဒီနေရာမှာ အစားကို ပြောတာဆိုပေမယ့် ခွေးစားချင်တာက အစားတစ်ခုတည်း ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ အစားအပြင် တခြားဟာတွေလည်း ရှိမှာပါ။)
ခွေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာကြောင်းတစ်ခုကို ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်းပြားပေါ်မှာ ပန်းချီဆရာက အဲဒီစာကြောင်းကို အသေအချာ ရေးထားတာပါ။ ပြီး အိမ်ရှင်က ဧည့်ခန်းမှာ အိမ်လာတဲ့သူတိုင်း ထင်းကနဲမြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ချိတ်ထားတာပါ။ စာကြောင်းကတော့ “လူတွေအကြောင်းသိလေလေ၊ ခွေးတွေကိုပိုချစ်ချစ်လေလေ” တဲ့။ ကျနော်အဲဒီစာကြောင်းကို မြင်စကတည်းက အတော်ဘ၀င်မကျတာပါ။ အိမ်ကို အလည်ပဲရောက်လာလာ၊ ကိစ္စရှိလို့ပဲရောက်လာလာ ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းရဲ့ရင်ဝကို ခြေနဲ့ဆီးကန်လိုက်သလိုပါပဲ။ အတော်ကြည်နူးစရာမကောင်းတဲ့ စာကြောင်းပါ။ သူက လူတွေကို ဘယ်လို စိတ်နာနေလို့ပါလိမ့်။ သူဆိုလိုချင်တာက လူတွေက ခွေးတွေလောက်တောင် သစ္စာမရှိဘူးလို့ ပြောချင်တာလား။ အိမ်လာတဲ့သူအပေါင်းကို မင်းတို့လူတွေက လိမ်လည်လှည့်ဖြားတတ်လွန်း၊ ကျေးဇူးမသိတတ်လွန်းလို့၊ ငါကတော့ မင်းတို့ကို ခွေးတွေလောက်တောင် မခင်တွယ်ဘူးဟေ့ဆိုတာကို ပြောချင်တာလား။ ထားပါတော့ ကျနော့်ကတော့ ဘယ်လိုပဲနေနေ ဒီစာတန်းကြီးကို မြင်ရတာ အတော် ဘ၀င်မကျတာပါ။
ခွေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ “လူပု စိတ်တို၊ ခွေးပု ရန်လို”တဲ့။ အရပ်ပုပြီး စိတ်အလွန်တိုတတ်တဲ့သူတွေကို စချင်၊နောက်ချင်တာနေမှာပါ။ ရှိပါသေးတယ် “ခွေးဝဲစား”၊ “သားရေပေါ်အိပ်၊ သားရေနားစား”၊ “ဈေးခွေး”၊ “မွဲချင်တဲ့ခွေး ပြာပုံတိုး”၊ “ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်” ဆိုတာတွေ။ စိတ်ထဲပေါ်လာသလောက်ချရေးတာပါ။ အဓိပ္ပါယ်တွေတော့ မဖွင့်တော့ပါဘူး။
ကြားဖူးတာ နောက်တစ်ခုက လူတွေက သခင်ဖြစ်ချင်လို့ ခွေးမွေးတာတဲ့။ ကိုယ့်ကသာ ကျွေးမွေးထားတယ်ဆိုရင် ခွေးဆိုတာ သခင်အပေါ်မှာ အလွန်သစ္စာရှိသတဲ့။ ညရေးညတာ ခြံလုံအောင်လည်း ကင်းစောင့်တတ်ပါတယ်။ မွေးရကျိုး အလွန်နပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အလှမွေးကြတာပါ။ လမ်းလျှောက်ဖော်ပေါ့။ ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး သာမန်လူတွေတောင် ၀ယ်မစားနိုင်တဲ့ အသားတွေ၊ အစားတွေကို ကျွေးရပါသတဲ့။ ခွေးနဲ့လူကြားက ဆက်ဆံရေးတွေပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ခွေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ ကျနော့်အမြင်ကို ပြောချင်တာပါ။ ခွေးဆိုတာကို ကျနော်က ခြံလုံအောင် ကင်းစောင့်စေဖို့ပဲ မွေးလိုတာပါ။ ၀အောင်ကျွေးမယ်၊ ခွေးနဲ့တန်တဲ့နေရာ စီစဉ်ပေးမယ် (ခွေးခြံဆောက်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ။) ခွေးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုမလိုတဲ့အချိန် (ဥပမာ၊ နေ့ခင်းလို အိမ်မှာ လူတွေရှိနေတဲ့အချိန်)မှာ ခွေးကို ခွေးခြံထဲမှာပဲထားမှာပါ။ ခွေးရဲ့အစောင့်အရှောက်လိုတဲ့ ညလိုအခါမျိုးမှာသာ ခွေးကို ခွေးခြံထဲက လွတ်ပေးပြီး ခြံအစောင့်ခိုင်းမှာပါ။ ခြံလုံအောင် အစောင့်ခိုင်းဖို့ မွေးတဲ့ခွေးကို သခင်ဖြစ်တဲ့ ကျနော်က ကြောက်လာရရင်တော့ မကြိုက်တော့ပါဘူး။ အစာကျွေးတဲ့ လက်ကို မာန်တွေဖီလာပြီး ကိုက်ချင်လာရင်တော့ အတော့်ကို ကျနော် မနှစ်မြို့တော့တာပါ။ စာဖတ်သူတွေရော ခွေးမွေးမယ်ဆိုရင်ရော ဘာကြောင့် မွေးချင်တာလဲ ပြောပြပါလား။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ကျနော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ကိုယ့်မွေးထားတဲ့ခွေးက ကိုယ့်ကိုပြန်ခြောက်လို့ ကြောက်ရတဲ့သူတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:04 PM4comments
ကမ္ဘာမြေ ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ပဲ အရင်ဆုတောင်းတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းနေမှလဲ တခြားအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အချိန်ယူနိုင်မယ်လေ။ ချစ်ချင်းအားဖြင့် ဆုတောင်းချင်တာက ကမ္ဘာမြေစိမ်းလမ်းပါစေပေါ့။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ ရှေ့တန်းကိုအရောက်ဆုံး၊ ကျွန်တော်တို့ကို ဆိုးရိမ်လောက်အောင် ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ပြဿနာက ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းရေးပေါ့။ သဘောတူလား၊ မတူဘူးလားဆိုတာကို မပြောခင် ဒီနေ့တွေ့ဆုံနေရတဲ့ နေရာဒေသအလိုက် အပူချိန်တွေက သက်သေလိုက်မှာပါ။ စိမ်းလန်းတဲ့ ကမ္ဘာမြေဖြစ်အောင် ပြန်ပြုပြင်ရအောင်လို့ ကြွေးကြော်သံတွေဟစ်၊ စည်းရုံးရေးတွေလုပ်နေယုံနဲ့တော့ အဆင်ပြေမဲ့ အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကဲ.. ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။
ဧပြီလ ၂၂ ရက်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းရေး လုပ်ကြပါစို့လို့၊ သတ်မှတ်ကြွေးကြော်ကြတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကမ္ဘာမြေအတွက် စိမ်းလန်းရေးကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပ်နေရမှာပါ။ လုပ်ကြရမယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့တတွေက ပြန်ပေးဆပ်ရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေက စားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုပြီး၊ ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဆိုပြီး သဘာဝတရားရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို သုံးဖြုန်းလိုက်ကြတာ။ ဘယ်တော့မှ မကုန်နိုင်မခန်းနိုင်မဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လက်ဆောင်ဆိုပြီးပေါ့။ သဘာဝတရားကြီးကတော့ ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ညီမျှစွာ အချက်ကျကျ တုံ့ပြန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးတွေအတွက် ပြန်ပေးဆပ်ရပါမယ်။ ဟုတ်ကဲ့ စာနာမှုရှိစွာပဲ အားလုံးပြန်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ဂရုစိုက်မှုလေးနဲ့ ပြုစုပေးနေရုံပါပဲ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ အပူချိန်တွေ တိုးလာလိုက်တာ၊ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမှာမှ သက်သာတယ်မရှိပါဘူး။ အအေးဓါတ်လွန်ကဲတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာနေရတာ အနည်းအကျဉ်း သက်သာသလိုထင်ရပေမဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမှာတော့ အပူချိန်လွန်ကဲမှုဟာ ဆိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ တောတောင်ရေမြေကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မှ သဘာဝတရားရဲ့ ဂေဟစနစ်တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တတွေ သဟဖာတဖြစ်မှာပါ။ သဘာဝတရားကြီး ကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်နေပြီး စိမ်းလန်းတဲ့ တောတောင်ရေမြေနဲ့ဆို ဇီဝမျိုးကွဲတွေကြွယ်နေမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအတွက်လဲ သာယာဝပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြည့်စုံချမ်းသာမှုတွေ ရှိလာမှာပါ။ ကံကောင်းတာကတော့ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးဆပ်ရမှာက တောတောင်ရေမြေ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အခြေခံကျတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေစိုက်ပေးရုံပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်အဖေကို ကျွန်တော်ဆရာလုပ်မိပြီးမှ အရှက်ရတဲ့အကြောင်းလေး ပြောအုံးမယ်။
အညာက အဖေတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ တစ်ခါမှာပါ။ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တရားဓမ္မမှာပျော်နေတဲ့ အဖေ့ကို၊ အဖေရယ် နောင်ကိုယ့်အတွက်ပါတာလဲလုပ် ပြီးတော့ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ကောင်းမဲ့ အမွေတွေလဲ ချန်ခဲ့အုံးပေါ့။ အမွေချန်တဲ့နေရာမှာ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးအမွေ အရိပ်ရ သစ်ပင်တွေသာ များများစိုက်ပေါ့လို့ ဆရာလုပ်လိုက်မိတာ။ အဖေက အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်နေပြီးမှ ဆရာလုပ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူစိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေအကြောင်းပြောပါတယ်။ နောက်ထပ်စိုက်မဲ့ အစီအစဉ်တွေလဲ ပြောပြပါတယ်။ အားကြိုးမာန်တက် မဟုတ်သော်လည်း တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ဆိုရင် အတော်ဟုတ်နေပါပြီ။ ဆရာလုပ်မိတဲ့ ကျွန်တော်သာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ စိမ်းလန်းရေးအတွက် ကိုယ့်အခန်းမှာအလှစိုက်ဖူးတာကလွဲရင် ဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူး။ အများနဲ့မယှဉ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ပဲယှဉ်ချင်ပါတယ်။ တစ်ဦးစီ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ အပင်လေးတွေစိုက်သွားကြမယ်ဆိုရင် စိမ်းလန်းရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်တွေရှိလာမှာ အသေအချာပါ။ ဘယ်နေ့မှာတော့ အပင်စိုက်ကြစို့လို့ မပြောလိုဘူးဗျာ၊ ခင်များတို့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်မှာဒီအလုပ်လေးကို စွဲထားပြီး အချိန်ရတိုင်း စိတ်ပါတိုင်းမှာ အပင်စိုက်ကြစို့ဗျာ။ မကောင်းဘူးလား။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 2:06 PM9comments
လာ. သွားစို့ အတူ
၀ါရွက်တို့လည်း ပြုတ်လုလီ ။
ဥပုဒ်စောင့် ၊ ဘုရားသွား
အရိပ် ၃ပါးမှာခိုကြ ရင်း
သြော် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ သောက
ဘ၀ ဘ၀တွေဖြစ်သမျှတော့ ကြုံရဆဲ ။
ကဲပါကွယ် . . .
ဘေးမဲ့ပေး ၊ သားငါးလွှတ်
သက်ကြီးများကို ကန်တော့စို့ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 11:31 AM6comments
ဆွေသဟာအပေါင်းနဲ့တကွ လူနတ်သတာ အားလုံး ၁၃၇၀ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ
အောင်မြင်ခြင်းတွေအပြည့််နဲ့ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းကြပါစေ ။
လွဲနေတဲ့ ဆုံမှတ်များ ရက်ရာဇာများများရပါစေ။
မြျြဲမံသော တွဲလက်များ ဆထက်ပိုး တိုးလို့မြဲပါစေ။
လပ်ဟာနေတဲ့ကွက်လပ် ရေပက်မ၀င်အောင် ပြည့်ပါစေ။
သူ့အကျိုး ငါ့အကျိုး ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးမှ ဝေးကွာကြပါစေ။
အခါမလပ် စိတ်နဲ့ကိုယ်ကပ်လို့ လောကကပ် ၃ပါး ဝေးရာမှ ရှောင်ရှားကြပါစေ ။
အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် အမြင်ကပ်ခံရခြင်းဘေး ၊
အမြင်တွေခြားလို့ အသားနာတာထက် ခံရခက်တဲ့ဘေး၊
ထာဝရ စိတ်ပူလို့ ကိုယ့်ကိုငြူစူမယ့်ဘေး၊
. . . . . . . . . . . . . ဘေး
သာပါစေ ၊ မာပါစေ၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ။
My e-journal ၀ိုင်းတော်သားများ
(တားမြစ်ထားသော ၊ ကေဇက် ၊ တာတူး )
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 8:12 AM0comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် တာတူး (ဝါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက်
ကိုယ် မြင်သလို ပဲ ကြည့်ကြတာပါ
လူတွေ အားလုံးက ကိုယ် မြင်သလို ပဲ ကြည့်ကြတာပါ။
ငါဟာ လူဆိုး ၊ ငါတကော ကောနေတဲ့ ကောင်လား ကိုယ့်ပေတံနဲ့ ကိုယ်တိုင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြသူချည့် ။ သူတော် တကာ ဘာတွေ ခံစားနေရသလဲ တွေးတောင်ကြည့်ဘူးပါရဲ့လား၊ ငါဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုလုပ်လို့ ဘာတွေများ ဖောက်ဖျက်ဘူးပါသလဲ ။စောင့်ထိမ်းလို့ လူဖြစ်နေကြတဲ့ လောကမှာ ငါက လူပီသချင်သူလေ။ ငါလက်ကိုင်ထားတာက ကိုယ်ချင်းစာတရား ၊ လောက ပါလတရားကို ကိုးကွယ်ပြီး ညစ်ကျယ်ကျယ် မလုပ်တာတောင် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်။ သူတော်တကာကို မျှော်ငေးကြည့်တော့လည်း မင်းကအပြစ်တွေမြင်။ ငါ့ရင်တွေလည်း ဟင်းလင်းပြင်တွေဖြစ်လို့ ။ ငိုသံတွေ ၊ မျက်ရည်တွေ ပင်လယ်ထ၊ ရယ်သံကတော့ ကြောက်တလှည့် ပျောက်တစ်ခါပေါ့။
လောကကြီး က မတရားဘူးလို့ ငါရေရွတ်တာ က တရားတယ်။ ဒါက ငါ့အထင်ပေါ့ ။ မင်းလည်း မင်းမြင်သလို မြင်လိမ့်မယ်။ ဒါက မင်းအပိုင်း ၊ကိုယ့် သမိုင်းကိုရေးပေါ့ ။ အမြင် မတူတာ သဘာဝလို့ သေချာ မြင်ကြည့်ရင် ငါထင်ပါတယ် လောကလည်း အေးချမ်းနေလိမ့်မယ် ။ ဘာမှ သေချာမသိပဲ လိုရာတွေဆွဲတွေး ၊ မင်းရေးချင်သလိုရေးမှတော့ ဒီပြဇာတ်မှာ ငါဆိုတာ ထာဝရလူကြမ်းလေ လေးမထမ်းလည်း မုဆိုး၊ ပိုက်မဆွဲလည်း တံငါ ပေါ့ အသက်ရှူရတာတောင် ကျပ်ကျပ်လာတယ်။ ကံ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဆရာကလည်း ခုထိ ငါ့ကိုမျက်ကွယ်တွေပြု ။ ငါလည်း ချစ်တာပါပဲလို့ စကားတွေ တိမ်ပေါ်တင်ပြီး မင်းကလွှင့်၊ ရင် တကယ်ဖွင့်သံတွေကျ အတုလို့ရိုးစွပ်၊ ကျွတ်တမ်းမ၀င်တဲ့ တစ္ဆေလိုပဲ ငါတို့အားလုံးက အသက်တွေ ရှည်။
မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တတ်တဲ့လောကမှာ ဘ၀ကို ပုံစံချ ခံချင်တဲ့ငါက အရူး။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အတ္တကိုဖက်တဲ့ ခေတ်ပျက်မှာ ငါက ပေးဆပ်ချင်တော့လည်း ဆူးကြားကဘူးသီးလို ဒဏ်ရာဗရပွ ။ ပရိတ်သတ်က နွား လို့ ငါ့ကို မကျေမနပ်နဲ့ အမည်တပ်တယ် (ရင်နာစွာ ) ။ မာနတ်လို့ မင်းက ဆေးခြယ်တယ်(သေချာ မတွေးပဲ )။ တစ်ချို့ ပရိတ်သတ်က နေရောင်ကိုကျောခိုင်းပြီး ဆန်ကောတီး ပုံးခေါက် ။
ငါက လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး . . . . . ပြီးတော့ ရှိက်ကြီးတငင် ငို။
လူတွေ အားလုံးက ကိုယ် မြင်တတ်သလို ပဲ ကြည့်ကြတာပါလေ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 1:56 AM2comments
လောကမှာ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှူ့တွေ များများလာတယ်ဗျာ။
မတ်လ ၂၅ ညနေပိုင်းက ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်က ကျနော်တို့ ဆရာ ဦးအောင်အောင်သိန်း ဆုံးတယ်လို့ သိရတယ် ။ခုနောက်ပိုင်း ကျနော်ကြားနေရတာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတွေ ကြွေကြွေကုန်ကြတယ်။ အခုလူသိများတာကတော့ သတင်းစာဆရာကြီး ကြေးမုံ ဦးသောင်း ၊နောက် အဖွား လူထုဒေါ်အမာပေါ့ ။ကျနော်တို့ လက်လှမ်းမမှီလို့ မသိတဲ့ သူတွေလည်း များမှများပေါ့။
တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေ ၊ တန်ဖိုးသိတဲ့လူတွေ ကြွေကြလေတော့ အားလုံးက နှမြောတသစွာ ။ သူတို့အားလုံးကတော့ လောကကို လာသွားတယ်။ အလှဆင်သွားတယ် ။ ပြီးတော့ ပြန်သွားကြတယ် ။ လူ့ဘ၀ဆိုတာကို အဓိပ္မွာယ်ရှိရှိ အသုံးပြုသွားကြတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြတယ် ။ကိုယ်သေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့အားလုံး လက်ဗလာနဲ့ ပြန်ရတာပါပဲ ။ မွေးတုံးကလည်း လက်ဗလာ ၊ ပြန်တော့လည်းပဲလက်ဗလာပါ ။ အရွယ်သုံးပါးမရွေး သေနိုင်တာပါပဲ။ ငါတော့ ငယ်သေးတယ် မသေနိုင်သေးပါဘူး ဘယ်ရှိမလဲ။ ကံကုန်ရင် တော့ ပြန်ရမှာပါပဲ ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ ၊ တတ်နိုင်သမျှတော့ သမိုင်းလှအောင် လုပ်ကြပါ၊ လောကကို အလှဆင်ကြပါလို့ မေ့နေသူတွေကို အစဖော်ပေးလိုက်ပါတယ်။်
ဆရာကြီးများနဲ့ အဖွား ကို ရိုသေ၀တ်တွားစွာ ဂါဝရပြုလျက်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 1:38 PM4comments
အဆောင်မှာရေလွှမ်း အပင်အားလုံး စိမ်းလန်းတော့
မကြေသေးတဲ့ ၀ဋ်ကြွေး ပြန်ပေးဆပ်ဖို့အတွက်
ငါ. . . ကျောင်းတက်လာရတယ် ။
အဖော်တွေနဲ့ ပျော်ပါးခဲ့ရတယ် ။
ဘယ်သူမှလည်း မစားသုံး . . .
ငါ . . . ဒီအတိုင်း သေဆုံးရတော့မလား ။
(တစ်ချိန်ုတုံးက ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ကျောင်းပိတ်ခါနီးရေးဖြစ်ခဲ့တာ။ ခုလည်း နွေကျောင်းပိတ်ချိန် ကို လွမ်းတာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:29 AM 1 comments
အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေသတည်း ။
ဘာမှလည်း မသက်ဆိုင်သော၊ ထို့ထက် ဘာမှ မတတ်နိုင်သော ၄င်းထက် အဝေးရောက် မိုးခေါင်ရပ်ဝန်း တစ်ခု၏ ဆုတောင်း ကျောက်စာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 8:49 AM0comments
အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေသတည်း ။ဘာမှလည်း မသ...